24 जेनेटिक्स एक युरोपेली जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हो जुन पहिले नै चलिरहेको छ 90 देशहरू भन्दा बढी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रतिष्ठाको अन्तरराष्ट्रीय टोली द्वारा बनाईएको यो पहिले देखि नै छ रोकथाम र पूर्वजों को आनुवंशिक परीक्षण को सबै भन्दा ठूलो यूरोपीय कम्पनी। हाम्रो डीएनए टेस्ट NCBI द्वारा, विश्व को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आनुवंशिक जीव द्वारा मान्यता प्राप्त छ। हामी कम्पनी हो अधिक विविधता अन्तिम उपभोक्ताको सीधा परीक्षणका लागि र मानिन्छ बजारमा सबभन्दा बढी.
किन 24Genetics छान्नु हुन्छ?
पहिलो यूरो स्वास्थ्य र अन्वेषण टेस्ट कम्पनी
90 देशहरू भन्दा बढि बिक्रीमा हामी हामी सबैभन्दा उच्च अन्तर्राष्ट्रिय विकासको कम्पनीमा छौं। युरोपमा हामी हाम्रा थुप्रै उत्पादनका नेताहरू हौं र हामी अन्य क्षेत्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडिहरू मध्ये एक हुन थाले। हाम्रो रिपोर्टहरू5भाषाहरू भन्दा बढीमा उपलब्ध छन्।
हामी दुनियामा सबैभन्दा ठूलो उत्पाद पोर्टफोलियोसँग उपभोक्तामा डीएनए कम्पनी हो। एक किटसँग तपाईंसँग सबै कुरा छ। तपाईले आज आफ्नो प्याकेजलाई7रिपोर्टको साथ क्रम गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं एक रिपोर्ट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि पुर्खाहरू) र तपाईंले आवश्यक पर्नुहुने दिन तपाईं हामीलाई कुनै पनि बाँकी रिपोर्टहरूको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाइँ अर्को निकासी किट पठाउन आवश्यक पर्दैन।
सबैभन्दा पूर्ण जेनेटिक परीक्षण
हाम्रा पुर्खा परीक्षणले तपाईँको% DNA भन्दा बढी 550 क्षेत्रहरू देखाउन सक्षम छ। अन्य बजार पुर्खा परीक्षकहरूले तपाईंलाई देख्नेछन् कि तिनीहरूले तपाईंलाई या 50 क्षेत्रहरू देखाउन सक्षम छैनन्। हाम्रो हेल्थ टेस्टले 250 खण्डहरू भन्दा बढी छ (चाँडै तिनीहरू 500 भन्दा बढी हुनेछ), अमेरिकाको नेताबाट 100 भन्दा कम। हाम्रो बाकीको तुलना तुलना गर्नुहोस् र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि हामी सबै भन्दा ठुलो हो।
सबैभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी:
ILLUMINA र ILUMUMINA ONLY
सस्तो जेनेटिक परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ वा तिनीहरू राम्रो हुन सक्छन्। हामीले गुणवत्ताको लागि रोजेका छौं। हाम्रो आनुवंशिक परीक्षण इलाइट्यूनिना टेक्नोलिंग मशीनहरुमा इलुमिना टेक्नोलोजी मा 100% मा आधारित छ, इल्युमिना चिप्स र युरोपेली प्रयोगशालाहरुमा उच्चतम गुणस्तरको ग्यारेन्टीमा।
हामी तपाईंको डेटा अनलाइन छैन
हामी तपाईंको आनुवंशिक डेटाको महत्वबाट चिन्ता छौं र हामी तिनीहरूलाई उनीहरूको रक्षा गर्न सक्दैनौं। हामी तपाईंको जानकारी उजागर गर्दैनौं, र यो अनलाइन हामीलाई हामी लाग्न सक्ने अधिकतम तह सुरक्षा जस्तो लाग्दैन।
हामी राम्रो छैनौं
तपाईको जेनेटिक डेटा
क्षेत्र मा अधिक भन्दा ठूलो कम्पनीहरु तपाईंको आनुवंशिक डेटा बेचन गरेर आफ्नो लाभ प्राप्त गर्दछ। एक सस्तो टेस्ट बेच्ने र फेरि डीएनए बेच्ने एक साधारण अभ्यास हो, खासगरी गैर-युरोपियन कम्पनीहरूमा। कम मूल्यहरूद्वारा मूर्ख नगर्नुहोस्, तपाईं पछि के हो भन्ने बारे जान्नुपर्दछ। सिक्नुहोस्
र थप प्राइभेट
हामी तपाईंको गोपनीयता अत्यधिक चरम लिन्छौं। हामी युरोपेली कानुनी कानुनी कानुनी कानुनी आवश्यकताहरु भन्दा बढी जान्छौं। यस क्षणबाट तपाईंले परीक्षण गर्नुहुने छ, तपाईंको नमूना गुमनाम कोड हुन्छ, र तपाईंको रिपोर्ट पनि तपाईंको पूरा नाम हुनेछैन।